I-China Ifake I-Silica Yomenzi Wesicelo Esiphikisayo Nomphakeli | I-Dinglong
Ukuqina kwevolumu ephezulu, ukunwetshwa kwevolumu ephansi nokuhlanzeka okuphezulu kwenza i-silica ehlanganisiwe ibe yinto ewusizo kakhulu futhi eguquguqukayo yezinhlelo zokusebenza ze-refractory, kungaba kuma-launders e-aluminium noma ezinye izinhlelo zokusebenza ezihamba kakhulu.
Ukuqhuba okuphansi kokushisa kukhiqiza ukupholisa okulawulwa ngokuvikela
I-silica yethu ehlanganisiwe inokuqina okuhle kwevolumu, okuholela ekusakazweni kwesimo senetha. Ngaphandle kwalokho, kuyinto evikela ngokweqile ene-conductivity ephansi kakhulu yokushisa kanye nokumelana okuphezulu kwe-thermal shock. Kuvame ukusetshenziselwa ukusakaza okuqhubekayo kwezinsimbi kanye nemiqulu yengilazi.
IDinglong ikhiqiza imikhiqizo enhlobonhlobo ye-silica namamaki womkhiqizo othize ukuze kuhlangatshezwane nazo zonke izidingo zezicelo zokuphikisa. Onke amabanga okufaka isicelo akhiqizwa ngaphansi kwezimo ezilawulwa ngokucophelela futhi ahlolwa ngaphansi kwezimo ezahlukahlukene ukuze kunikezwe amakhasimende ethu ikhwalithi kanye nokuvumelana okudingekayo ukwenza imikhiqizo ihlanzeke kakhulu nezinga lokunemba okulinganiselwe.
Le silica ehlanganisiwe yesicelo sokuphikisa yenziwe esikhungweni esiqinisekisiwe eLianyungang, eChina. Ngeminyaka engama-30 yokusungulwa, uDinglong uzuze ukusekelwa okuqinile kwemishini nobuchwepheshe futhi waqongelela okuhlangenwe nakho okukhulu ngokukhiqiza izinto ezinhle ze-quartz. Izinqubo zethu zokukhiqiza zenzelwe ukuvumelana nokwethembeka - kusiza ukuqinisekisa ikhwalithi nomkhiqizo onokwethenjelwa. Sikholelwa ukuthi imikhiqizo ethembekile ingasisiza ukuthola ukuthengisa kobuholi futhi sakhe ukuthembana nobungani namakhasimende ethu.
Langaphambilini I-Silica efakwe ku-Investment Casting
Olandelayo: I-Silica ehlanganisiwe